Ukuthengisa Nokumaketha: Umdlalo Wangempela Wezihlalo zobukhosi | Martech Zone
NgeSonto, ngoJuni 21, i-2015 Douglas Karr
Lokhu kuyi-infographic enhle evela eqenjini lePardot ezinhlanganweni lapho ukuthengisa nokumaketha kunzima khona ukuzivumelanisa. Njenge umxhumanisi wezokukhangisa, silwe nezinhlangano eziqhutshwa ukuthengisa futhi. Enye inkinga esemqoka ukuthi izinhlangano eziqhutshwa ukuthengisa zivame ukusebenzisa okulindelwe okufanayo abanazo eqenjini labo lokuthengisa eqenjini lokumaketha.
Siqashwa izinhlangano eziqhutshwa ukuthengisa ngoba ziyabona ukuthi umkhiqizo wazo awuzange wakhe ukuqwashisa, igunya nokwethembela ku-inthanethi nokuthi iqembu labo lokuthengisa liyabhidlizwa ngabancintisana nabo abakwenzayo. Kepha-ke lapho ukutshalwa kwezimali sekwenziwe ekwakheni lokho kwazisa, igunya nokwethenjwa - umholi wezentengiso uqala ukuqhuzuka kancane ngekhwalithi yokuhola, ubuningi bokuhola, isivinini sokuvala, kanye nenani lokuzibandakanya. Kulindelwe okuyinqaba ukufaka isicelo esikhathini esifushane. Sifuna ukukala umfutho uma kukhulunywa ngokukhangisa.
Sifuna ukuqinisekisa, ngecebo elihle lokumaketha, ukuthi siyaqhubeka nokukhulisa ukuqwashisa, ukwakha igunya, nokuthola ukwethenjwa. Ngokuxhumana nenhlangano yokuthengisa, sifuna ukwenza isiqiniseko sokuthi sikhiqiza imvuthu yesinkwa esifanele ezosiza umuntu othengisayo ukuvala ukuthengisa. Ngokuhamba kwesikhathi, sifuna ukubuka ikhwalithi yokuhola ithuthuka, iholele ukwanda kwenani, izindleko ngokuhola ngakunye kuthambekele phambili, kwandise isivinini sokuvalwa nokubaluleka kokuzibandakanya. Kufanele sikubheke lokhu isikhathi eside… izinyanga neminyaka, hhayi khona manjalo.
Ngezinhloso ezahlukahlukene, izisusa, namathuluzi, ukuqondanisa iminyango yokuthengisa nokumaketha yenkampani yakho kungaba yinselelo yansuku zonke. Njengoba iqembu ngalinye lifaka isimangalo salo ezindaweni ezahlukahlukene zenqubo yebhizinisi, kungaba nzima ukuthola noma iyiphi indawo esivumelana ngayo. Kodwa-ke, lapho ukuthengisa nokumaketha kusebenza ndawonye ukukhiqiza ukuhola, ukukhulisa ubudlelwano, kanye namadili aseduze, inkampani ingachuma. UMat Wesson, uPardot.
Isichasiso sinzima kakhulu. Angikholwa ukuthi noma ikuphi ukuthengisa kufanele kubangelwe ukuthi kukodwa noma. Umuntu wakho othengisayo kufanele akwazi ukuqhubekela phambili futhi abonge ithimba lezokumaketha ngokwazisa nokuhola phambili ngasekupheleni. Ithimba lakho lokumaketha kufanele likwazi ukuhlinzeka ngokuhlaziywa okuphelele kokuthi imizamo yabo isiza kanjani omele abathengisi. Kungakho ngisazisa isiphetho salesi infographic - sikhomba Kanjani ezenzekelayo zokumaketha - nge ukuhola / ukuhola, ukuhola ukukhulisa futhi ukubika kuzosiza iqembu lokuthengisa futhi liqondise iqembu lokumaketha ekuthuthukiseni amasu wokuthola jikelele.
Inothi eliphansi: Njengesosha Lokumaketha, ngifaka i-CMS yami ngamakhasi okufika kanye nezindlela zokubizela isenzo ngaphambi kwe-Twitter kanye ne-Adwords. Okuqukethwe (ngomkhiqizo osunguliwe) kufanele kube yisisekelo sanoma yiliphi isu lokumaketha elingena ngaphakathi.
Tags: umdlalo wema-Throneukuhola okuholayoukuhola ukukhulisaukuhola ukubikaukuhola amagoliugqozi lokumakethaamathuluzi wokumakethaushweleinkinga yokumakethainkinga ngokuthengisaukuthengisa nokumakethaisisusa sokuthengisaamathuluzi okuthengisaukuthengisa kuqhathaniswa nokumaketha
Ithebula Lesikhathi Lokumaketha Okuqukethwe